ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၇) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
တစ်ချိန်ကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးဟာ (၁၄၃)မျိုးထဲတွင်ပါဝင်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
ရေးသားသူ — အောင်တင်
မြန်မာပြည်ရဲ့ နယ်စပ်တနံ တလျားမှာ နှစ်နိုင်ငံကိုခွပြီး နေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရှိနေပါ တယ်။ မြို၊ ခမီး၊ လူချိုင်း၊ မရမာကြီး၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ နာဂ၊ မီဇို၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ၀၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ လီ ဆူး၊ ပဒေါင်၊ ကရင် ၊ မွန်၊ စ သဖြင့် တိုင်းရင်းသားအသီး သီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ နေထိုင်ကြသူများရှိသလို တ ဘက်နိုင် ငံတွေဖြစ် တဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ တရုတ်၊ လာအို၊ ယိုး ဒ ယားနိုင် ငံတို့မှာ နေ ထိုင်ကြ သူများ လည်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသား အခွင့် အရေး၊ တိုင်းရင်း သားအခွင့်အရေးတွေကို မိမိအခြေချနေ ထိုင်သောနိုင်ငံတွေမှာ ရရှိနေပါတယ်။ ရလဲရသင့် ပါ တယ်။ ရပိုင် ခွင့်လဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တွေမှာ နှစ်တွေရာထောင်ချီပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပသျှူးလူမျိုးများ ရှိ နေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ ပသျှူးတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသား အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော် လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာနေထိုင်တဲ့ ပသျှူးတွေကိုတော့၊ မူလတိုင်းရင်း သား(၁၄၃) မျိုးမှာ တရားဝင် အသိ အမှတ်ပြု ထားခဲ့ ပေမယ့် မဆလ ခေတ်ကစပြီး ယနေ့တိုင်စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် က တိုင်းရင်းသားအဖြစ်က ပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ။ ဘာကြောင့် ပါလဲ။
ရခိုင်ပြည်မှာနေတဲ့ ကမန်လူမျိုးတွေဟာ သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ ဘယ်လိုမှငြင်းမရတဲ့တိုင်းရင်း သား စစ်စစ်တွေ ပါ။ ကမန်လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှအပ တခြား ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှ နေ ထိုင် သူများ လည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။ မဆလခေတ်အထိ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသတ်မှတ်ခံထား ရပေမယ့် အခု န၀တ၊ နအဖလက် ထက်ကျမှ ဒီလောက်သမိုင်း စဉ်လာ အရ အထင်ကရ တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကမန်လူမျိုးတွေကို တိုင်းရင်း သား အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုတော့ ပါဘူး။ သူတို့ကို မှတ်ပုံတင် မထုတ်ပေးတော့ဘူး။ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ် ထား တယ်။ သေမလို့ဖြစ်နေရင်တောင် ရန်ကုန်ကို ဆေးသွားကုဖို့ ခရီးသွားလက်မှတ်ကအစ အင်မတန် ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကိုးကန့်လူမျိုးသည် မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက်လုံးတွင် မည်သည့်အခါမှ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ရှမ်း လူမျိုး အတိုက် အခံ ခေါင်းဆောင်တဦးက ကိုးကန့်ဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် တရုတ် လူမျိုး စစ်စစ်ဖြစ် တယ် လို့ ပြောပြခဲ့ဖူးပါ တယ်။ န၀တ၊ နအဖတို့က ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ် လိုက်တော့၊ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်တတ်သူများ ကန့်ကွက်သံ မကြား လိုက်ရပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကမန်နဲ့ ပသျှူးလူမျိုးတွေမှာ တူညီမှုတခု ရှိနေတာကိုတော့ ပြောဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အစ္စလမ် ဘာသာ ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုးကန့်တို့သည် အစ္စ လမ် ဘာသာဝင်များ မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသည်ကို လက်မခံနိုင်သေးသူများရှိနေပါသလား။ ဒါမှမ ဟုတ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ အစ္စလမ်ဘာသာမှလွဲ၍ အခြားဘာသာများကို လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ သည်လို့ ပြဌာန်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျနော် တို့သည် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားပြော သလို ၂၁ ရာ စု အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး သူများလား။
ဒီနေရာမှာ စကားညှပ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပြောကြားလိုတာက ကျနော်သည် ကိုးကန့်ဆန့်ကျင်ရေး၊ တရုတ် မုန်း တီး ရေးသမား မဟုတ်သလို တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် မြန်မာတရုတ်များကို ချစ်ခင်လေးစား သူလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာ မွတ်စလင်များသည် မြန်မာတရုတ်များကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားသွေးပါသူများဖြစ်ပြီး တိုင်းချစ်ပြည် ချစ်များ၊ တိုင်းပြည် အတွက် အသက် စွန့်ကာကွယ်တတ် သူများ ဖြစ်ကြပါ တယ်။ မြန် မာပြည် ကို မြန်မာတိုင်း ရင်းသား တွေကလွဲလို့ တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘင်္ဂါလီပဲဖြစ်ဖြစ် လွှမ်းမိုး လာမှာ ကို မြန် မာမွတ် စလင်ကော၊ မြန်မာတရုတ် ကော လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို စမပြောခင် စာဖတ်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ရိုဟင်ဂျာကိုဘယ် လိုမြင်ပါသလဲဆို တာကို ကိုယ့်ဘာ သာမေးပြီး ကိုယ့်ဘာသာအရင် စမ်းပြီးဖြေကြည့်ပေးစေ ချင်ပါ တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
မေးခွန်းက သိပ်ရင့်သီးတယ်၊ အပြစ်တင်လိုသူများရှိလျင် ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ လှေပျက်ထဲ ထည့်ပြီး ပင်လယ် ထဲမျှောချတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက ထိုင်းပဲ။ ကျုပ် တို့မြန်မာပြည်မှာ ဒါလောက်တော့ မဆိုးသေး ပါဘူး ဆိုလာရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူးတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးလိုသဘောထားတဲ့ ပညာရှင် များ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ရေးပြီး လူသိရှင်ကြား ကြေညာထုတ်ဝေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆန့် ကျင်ရေး Influx Virus ဆိုတဲ့စာအုပ်အမည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရွံရှာမုန်းတီး စရာ ကောင်း တဲ့၊ အင်မတန အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးတွေ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို မပြန့်ပွားခင် အချိန်မီ အလျင်အမြန် ဖျက်ဆီးပစ်ရသလို ရိုဟင်ဂျာ တွေကို မျိုးတုန်း ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လှုံ့ဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် တဲ့ အတွေးအမြင်ပါ။
ရခိုင်လူမျိုးတွေကို မာဂဓဆိုတဲ့စကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ မောက်လူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အာရကန် လူမျိုးလို့လဲ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးကို ချစ်ခြင်း၊ အမျိုးဂုဏ် ကို စောင့် ရှောက်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ရခိုင်(ရက္ခိုင်)လူမျိုးလို့ခေါ်မှ နှစ်သက်ကြတာမို့ မောက်၊ အာရ ကန် လို့မခေါ်တော့ဘဲ အားလုံးက ရခိုင် လူမျိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။
တောင်သူက ပအို့၊ တလိုင်းက မွန်၊ ဂျိန်းဖောက ကချင်၊ ဆီရမ်(Siam)က ထိုင်း(Thai)၊ ဆီလုံ(Ceylon)က သီရိလင်္ကာ (Srilanka)၊ အက်စကီးမိုး(Eskimo)က အိနွတ်(Inuit)လူမျိုး စသဖြင့် မိမိအမျိုးအမည်၊ မိမိနိုင်ငံ အမည်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြတဲ့အခါ တခြားဘယ်လူမျိုး၊ တခြားဘယ်နိုင်ငံကမှ ငါသဘော မတူရင် ပြောင်းခွင့် မရှိဘူးလို့ မကန့်ကွက်နိုင်ပါဘူး။ ကန့်ကွက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ သဘော ထားကြီးစွာ၊ နားလည် မှု ထားကာ ကာယ ကံရှင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်း သတ်မှတ်ခေါ် ဝေါ်ပေးရတာပါပဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလား၊ နိုင်ငံသားလား၊ နိုင်ငံခြားသားလားဆိုတာကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး သူတို့က သူတို့ ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်စေချင်တာကို မခေါ်နိုင် ပါဘူး လို့ ငြင်းသင့်ပါသလား။ ငြင်းခွင့်ကော ရှိပါ သလား။ သူတို့ကို သမိုင်း မှာ စစ်တကောင်းသားလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘင်္ဂါလီကုလား လို့ ခေါ်ခဲ့ သည်ဖြစ်စေ၊ ခေါ်တော လို့ ခေါ် ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီနာ မည်တွေကို မကြိုက်လို့၊ ဒီနာမည်တွေ ဟာ နှိမ့် ချခေါ်ဝေါ်တာမို့ မခေါ်ပါနဲ့ လို့ တောင်းဆိုတာကို မရဘူး၊ မင်းတို့ နာတာ၊ မကြိုက်တာ ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါခေါ်ချင် တာ ငါခေါ် မယ်လို့ တဘက်သား ကို နှိမ့်ချပြီး ဆိုသင့် ဆိုထိုက်ပါသလား။
အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကို သမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာ အမည်းကောင်(Nigger) လို့ပဲခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမည်းကောင် (Nigger)လို့ပဲ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာ အထင်အရှား မှတ်တမ်း တင် ထားရှိခဲ့တာမို့ အမဲကောင် (Nigger)လို့ပဲ ခေါ်နိုင်မယ် လို့ ခုနေခါမှာ ပြောရဲသူများရှိပါသလား။ သူများတွေရဲ့ နှလုံးသားကို နာကျင်စေတဲ့ စကားလုံး မျိုး၊ အပြုအမူမျိုး ကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် စာနာတတ်ခြင်း၊ လူသား ဆန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာ တရား တွေရဲ့ အဆုံးအမများမှာ ပါရှိပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ် ကျေးမှုနဲ့လည်း ကိုက်ညီ ပါတယ်။
မူလကသတ်မှတ်ထားသော တိုင်း ရင်းသားလူမျိုး ၁၄၃ မျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက တရားဝင် ပါရှိထားပြီးဖြစ် တယ်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေထဲမှာလည်း၊ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး ဆိုပြီး ရေး သားပြဌာန်း ထားတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။
ရိုဟင် ဂျာတွေက လွတ်လပ်စွာ မဲပေးပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော် အမတ်တွေ လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်း ဆောင် ခဲ့ သလို၊ ဗဟိုအစိုးရထဲမှာ ကျန်းမာရေးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန်အဆင့် အထိ တာဝန်ယူခဲ့ တာရှိ ခဲ့ တယ်။ မြန်မာ့အသံက တိုင်းရင်းသားအသံတွေကို လွှင့်တဲ့အခါ ရိုဟင်ဂျာအစီအစဉ်ဆိုပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ် ကနေ ၁၉၆၅ခုနှစ် အထိ ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့ အသံလွှင့်ပေးခဲ့ တယ်။
စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက် မှာ မှ အသံလွှင့်အစီအစဉ်သာမက တိုင်းရင်းသားအဖြစ်ကပါ ပယ်ဖျက် ခံခဲ့ရ တယ်လို့ အထောက်အထားများနှင့်ပြဆိုပါ တယ်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတကြီး စပ်ရွှေသိုက်က ရခိုင်ပြည်က မွတ်စလင်တွေဟာ တိုင်းရင်း သား အစစ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် သွေး မစပ် တဲ့ လူမျိုးဆိုတာ မရှိဘူး။ သူတို့ဟာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ငါတို့ (ရှမ်း)တွေလဲ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တဘက်က အပြန်အလှန် တင်ပြတာက ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဖဆပလတွေ မဲရအောင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်း သား အဖြစ် လာဘ်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာ တ ဘက် နိုင်ငံ က မကြာသေး ခင်ကာလကမှ အလုံးအရင်းနဲ့ စီးပွားရေးအရ ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများ သာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို လက်ခံလိုက်ရင် သူတို့နောက်က ဘင်္ဂါလီ တွေဆက်ဝင်လာပြီး ရခိုင်တပြည်နယ် လုံးတွင်သာမက မြန်မာတပြည်လုံးမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ လွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ် ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို လူဦးရေပေါက်ကွဲမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်း လူမျိုးကြီးနှစ်မျိုးက ၀ါးမျို ဖုံးလွှမ်းသွားမှာကို မဖြစ်မ နေတား ဆီးကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတာမို့ အင်မတန် သဘာဝကျပြီးစိုးရိမ် စရာကောင်း တဲ့ ထောက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတာဝန်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့က နယ်စပ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအား လုံး အထူး သဖြင့် ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ကိုးကန့်တို့ထံမှ ပြည့်ဝပြတ်သားသော စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု (Uncompromised Commitment to cooperate)ကို မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရများဘက် ကလည်း နယ်စပ်ဒေသအားလုံး မှာ တိကျသောသန်းကောင် စာရင်း(Census) များ ကို ကောက်ယူ ထိန်းချုပ်နိုင် သော အနေအထား တရပ်ကို ဖေါ်ဆောင် နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တခုက ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်း တွေရှိခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကို ခွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့၊ မွတ်စလင်နိုင် ငံတော် တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တဲ့ အထောက် အထား တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထောက်ပြချက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တိုင်းပြည်မပြိုကွဲရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတာမို့ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ထောက်ပြ ချက်ဖြစ်ပြန် ပါ တယ်။ ဒီတရားမျှတတဲ့ စိုးရိမ်ချက်(Legitimate Concern)ကို ရိုဟင်ဂျာ တွေဘက်က အဖြေပေး နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေ၊ ဒီလိုအစွန်းရောက် အယူအဆတွေ ရှင်သန် လှုပ်ရှား နေတုန်း ပဲလား။ ရှိနေရင် ဘယ်လို ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်မလဲ။ မရှိတော့ပါဘူး ဆိုရင်တောင် နောင်တချိန်ချိန်မှာ ပေါ်ပေါက် လာနိုင် သလား။ မပေါ်ပေါက်လာအောင် ဘယ်လို ပူးပေါင်း ကာကွယ်သွားမလဲဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မိမိတသက်မှာ လုံးဝမကြားဖူးပါဘူး၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူးလို့ စကားကုန် ဆိုလာသူများကတော့ မိမိညံ့တာ၊ ဗဟုသုတနည်း တာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကို နားမလည်တာကို လူမသိ သိအောင် လူလည် ခေါင်မှာ မရှက်မကြောက်နဲ့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းပြနေ သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာစကားမပြောတတ်တာကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ မြန်မာ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ မြန်မာ ပြည်မှာတောင် နေထိုင်ကြသူများ မဟုတ်ဘူးလို့ မျက်စိ စုံမှိတ် ငြင်းတတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာစကားကိုလူတိုင်းမပြောတတ်တဲ့တိုင်းရင်းသား ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ နာဂ၊ မွန်၊ ကချင်၊ ကယား၊ပလောင်၊ လီဆူး၊ ၀၊ လူချိုင်း စတဲ့ တိုင်းရင်း သားတွေ အများအပြား စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် ဆိုရင် အမျိုးတရာကျော်လောက်တောင် ရှိနေ နိုင်တာကို သိဟန် မတူကြပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ကျနော့်မှာ မရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်၊ မပြုသင့် ဆိုတာ ကိုလည်း မဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ ဆွေးနွေးသင့်သော အချိန်ကာလ ရောက်ပြီလို့လည်း မထင်သေး ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာကို နောင်ဒီမို ကရေစီနိုင် ငံတော်ခေတ် ရောက်သောအခါ၊ ဒေါက်တာ ဦးအေးချမ်း၊ ဒေါက်တာ ဦးအေးကျော်တို့လို ရခိုင်ပညာရှင်တွေ၊ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ရိုဟင်ဂျာ ပညာရှင်တွေ၊ ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တခြားလို အပ်သော နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးနှင့် အမှန်ကန် ဆုံးဖြစ်မယ် ထင် ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လူတွေမျက်စိလျှမ်းနေတတ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတရပ်ကို ထပ်ထောက်ပြဖို့ လိုနေသေး တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို တဘက်နိုင်ငံက တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူတွေဆိုပြီး စစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးလုပ်လာတဲ့ အပေါ်မှာ ဒီရို ဟင် ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေက တဘက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတာမို့ အစစ်အဆေးမခံနိုင် ဘဲ တဘက်က သူတို့နိုင်ငံထဲကို ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဖြင့်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေသာဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်ဆင်ရေး အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတိုင်း ဘာလို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လက်ခံနေ ရတာလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ဆိုရင် ပြန်လက်ခံစရာ မလိုပါ ဘူး။ ပြန် လက် ခံရတယ်ဆို ကတည်းက ထွက်ပြေးသွားတဲ့ တဘက်နိုင်ငံသားဆိုသူတွေဟာ တကယ် တော့ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ သို့သော် ဒီနေရာ မှာ တဘက်နိုင်ငံ သားတွေ က တရားမ၀င် ခိုးဝင်နေထိုင် နေတာတွေလဲ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် တရားဥပဒေနဲ့အညီ စိစစ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအခါမှာ နောက်မေးခွန်းတခုက မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ပြန်လက်ခံရမှာကို သိနေရက်နဲ့ ဘာလို့ မောင်း ထုတ် တာတွေကို အကြိမ်ကြိမ်လုပ်နေရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေနှစ် ချက်ကို စဉ်းစားမိ ပါတယ်။
တခုကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တတိုင်းပြည်လုံး ရန်ကုန်ကအစ နယ်စပ်တွေအဆုံး မတည်မငြိမ်မှု တွေကို ဖန်တီးထားနိုင်မှ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာမျိုးက သက်ဆိုးရှည်တတ် တာမျိုးဖြစ်လို့ ဖြစ် ပါတယ်။
နောက်တချက်စဉ်းစားမိတာက၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေထဲက လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်အပြင်းထန်ဆုံး လူမျိုးစုတွေ ထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားက ထိပ်ဆုံးက အုပ်စုထဲမှာပါတယ်လို့ ကျနော်လေ့ လာ မိသလောက်အရ ထင်မိ ပါတယ်။ (လူမျိုးစုတွေ လွတ် လပ်ရေးလိုချင်တာ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်အုပ်ချုပ်ချင်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါ ဘူး။ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင် စုကို ဖွဲ့လိုရင်၊ တကယ်ပဲ တိုင်းပြည်အေးချမ်း ဖွံ့ဖြိုးလိုရင် တိုင်းရင်း သား တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းနိုင်ခွင့်ကို မဖြစ်မနေ အခြေခံ ရမှာဖြစ်ပါတယ်)။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ထူးခြားချက်နောက်တခုက ပြည်မကနေပြီး ဆက်သွယ်ရ အခက်ခဲဆုံး ပြည် နယ်ဖြစ်ခြင်း အပြင် မိမိဘာသာ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ ပထ၀ီအနေအထား ရှိနေခြင်း တို့ကလည်း အထောက် အကူပြု သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီတော့ မဆလအပါအ၀င် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ဒီရခိုင်အမျိုးသားတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းစုံ ကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ဖို့၊ ရခိုင်လူမျိုးတွေ အား နည်းစေ ဖို့ ဒုတိယ လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ(Constant in-fighting)ကို အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင် ဖန်တီးခြင်း က လည်း နည်းလမ်းတခုအဖြစ် သုံးစွဲခဲ့ တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဦးအေးချမ်းက သူငယ်ငယ်က ဘူးသီးတောင်က ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာ ကြီးပြင်းလာကြောင်း၊ အင်မတန် ချစ် ကြည်အေးချမ်းစွာနေ ခဲ့ကြရကြောင်း ကို ပြောပြဖူး ပါတယ်။ အေးချမ်း တယ်ဆိုလို့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ရခိုင်ကြားမှာ ပြဿနာ လုံးဝ မရှိဘူးလို့ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူ၊ စကားတူတဲ့ တရွာတည်း သားတွေ တောင် ရွာတောင်ပိုင်း နဲ့ ရွာမြောက် ပိုင်း ဓားခုတ်ပွဲဖြစ်တတ်သေးတာပါပဲ။
ဂျပန်ခေတ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ် အကူးအပြောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တချို့ အမြင်မကျယ် မှုတွေကြောင့် ဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် လူမှုပဋိပက္ခတွေကို ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ် သွားအောင် တွန်း ပို့လေခဲ့ သလားလို့ ဆင်ခြင် မိပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံထားတဲ့အမြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ဆွေး နွေး သွားလိုပါတယ်။
နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဒီမိုကရေစီရေး၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တန်းတူညီ မျှဖြစ်သော ဖက် ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်ကြီး (၃) ရပ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးချင် ပါတယ်။ ဒီအခြေခံ အချက်ကြီး (၃)ရပ်ကို လက်မခံနိုင်သူများကတော့ ကျနော့်ဆွေးနွေး ချက်တွေကို လက်ခံနိုင် မယ်မထင်ပါဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံသေးသရွေ့ လူမျိုးစုလွှတ်တော်လို လွှတ်တော်မျိုးမှာ ရိုဟင်ဂျာ တွေက လူ မျိုးစုကို ကိုယ်စားပြုပြီး တက်ရောက်ခွင့် မရှိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် လူဦးရေ ကို အခြေခံ တတ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ် တော်တွင်း မှာ တော့ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက လွှတ်တော် အမတ်တွေ အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပြီး တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြ မှာဖြစ် ပါတယ်။
လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဆိုတာ လူဦးရေပေါ်မှာ မူမတည်ဘဲ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာ အခြေခံပါ တယ်။ သန်းသုံး ဆယ်ကျော်နိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးက လူမျိုးစုလွှတ်တော် မှာ နှစ်ယောက် တက်ခွင့်ရှိရင် သိန်း ဂဏန်း လောက်ရှိတဲ့ လူမျိုးငယ် တခုကလည်း နှစ်ယောက်တက်ခွင့်ရတတ်တဲ့ လွှတ်တော်မျိုးပါ။ လူမျိုးစုတွေရဲ့ မူလရပိုင် ခွင့်တွေကို တာဝန်ခံထိန်းသိမ်း ကာကွယ်မယ့် အထက်လွှတ်တော် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ဆိနိတ် (Senate) လိုအဖွဲ့မျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတော့ လူဦးရေအချိုးအလိုက် တက်ခွင့်ရ တတ်တဲ့၊ တကယ့်ကို လူထုအခြေခံ တဲ့၊ တနိုင်ငံလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုယ်စားပြုတဲ့၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာပိုများတတ်တဲ့ လွှတ်တော်ဖြစ် ပါတယ်။
အနာဂတ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များ၊ အထူးသဖြင့် ရခိုင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် အောင်တည်ဆောက်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာရေး၊ အထူးသဖြင့် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသားများ ၀င် ရောက်လာမှု တားဆီးရေး၊ လုံခြုံရေးတို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်က့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ ထောက်ခံမှုမရဘဲ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ် ထင်ပါ သလား။ ဖော်သင့်တယ်လို့ကော ထင်ပါသလား။
နောင်တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရေးကို အရှည်မျှော်ပြီး ကိုယ်ကနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ သား တွေ ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရနိုင်သမျှရ လာအောင် အခုကတည်း က ကြိုးးစားစည်းရုံးဖို့ မသင့်ပေဘူးလား။
ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကို အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစွန်းရောက် အယူအဆတွေနှင့် ကင်းကွာသွား အောင် အကူ အညီပေးသင့်သလား။ ဒါမှမဟုတ် သာမန်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေကို အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အစွန်းရောက် အယူ အဆတွေဆီ တွန်းပို့သင့်ပါသလား။ ရိုဟင်ဂျာပြည် သူတွေထဲက အလယ်အလတ် ကျတဲ့(Liberal and Moderate) ခေါင်း ဆောင်တွေ ပေါ်ထွန်းလာအောင် စနစ်တကျ အကူအညီ ပေး သင့်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီအလယ်အလတ်ခေါင်းဆောင် တွေကို စိတ်ပျက်အား လျော့အောင် စိတ်ရှုပ်ထွေး အောင် စနစ်တကျ ပိတ်ဆို့ထားသင့်ပါသလား။
အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အယူအဆတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းက သာမန် ရိုဟင်ဂျာပြည် သူတွေကို ပညာပေး စည်းရုံးလက်တွဲရမယ်၊ အလယ်အလတ် သဘောထား ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖော်ထုတ် ပေး ရမယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး အခြေခံသင်ပုန်းကြီး ကကြီး၊ ခခွေး ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အမည်ကိုတောင် မကြားချင်တတ်တဲ့ အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်များကို တချက်လောက် ထပ်ထောက်ပြ လိုပါ သေးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်က တယောက်မ ကျန် မောင်း ထုတ်တာမျိုးကို လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါ သလား။ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်း စွာအတူနေနိုင်ဖို့ ဦးဆောင်မှုပေးချင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း ဆိုတာကို အချင်းချင်းကြားမှာရှိနေတဲ့ သံသယတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို အပြန် အလှန် လေးစားမှုနဲ့ ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်သာ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့် မတည်ဆောက်နိုင် ပါဘူး။ မိမိပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒုတိယအင်အားအကြီး ဆုံးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ လက်မတွဲ ဘဲနဲ့တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် အေးချမ်းတိုးတက်ရေး၊ လုံခြုံ ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မတိုးတက်ရင် ရခိုင်ပြည်သူ တွေလည်းတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါ။
နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် ရိုဟင်ဂျာလှေစီးဒုက္ခသည်တဦးရဲ့ ရေဒီယိုအင်တာဗျူးကို တင်ပြလိုပါတယ်။ သူက “ဗမာပြည် မှာ ဘယ် လိုမှလဲနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အစိုးရက ဒုက္ခပေးနေ တာပဲ။ ပင်လယ် ထဲမှာ တခါတည်း သေရင်လည်း သေပစေတော့ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သာမန် ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့ နိစ္စဓူဝ ဒုက္ခကို မည်သူမဆို စာနာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ။
စာရေးသူသည် ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်သော မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူ တဦး ဖြစ်ပါသည်။
← ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၆)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၈) →